Iyo Inotyisa 2014 CMO Nhungamiro kune Yemagariro Nharaunda Martech Zone
Chitatu, July 30, 2014 Chitatu, July 30, 2014 Douglas Karr
Nezuro, ini ndanga ndapedza iyi posvo uye ndanga ndotodzvanya kuburitsa pandakazogogodza doro pamusoro palaptop yangu. Ndinovimba yanga isiri karma yaiuya kuzorova bhuti rangu. Laptop yakapona, asi neimwe nzira iyo blog post yakanyangarika. Ndiri kunyora iyi positi neinhuwi hwehwahwa kumashure kuti undiyeuchidze kuti ndichengete hunyoro hwangu pasi.
Hechino chinhu, ini ndinofunga ichi chinotyisa infographic. Sekuona, haina chero kutaurwa kwenyaya yakazara chero. Ingori muunganidzwa wemafungiro akaunganidzwa kubva muzvinyorwa uye mishumo iyo - ini ndinotenda - yaizoita zvisirizvo zvinotyisa kune nzira yekambani yekushandisa rakakura renhau rezvenhau kuita uye kuvaka bhizinesi rayo online. Haina kuganhurirwa yeB2B, B2C, saizi yebhizinesi kana chidimbu cheindasitiri. Ugh.
Kutanga uye pamberi pezvese, kushomeka kwechero kutaurwa kweiyo chimiro chevanhu chemagariro zvinondityisa. Kuziva kweBrand hakuna kufanana nekubatana kwevanhu. Kuona logo ndiko kuziva brand. Kuunganidza masimba uye kuvimba pamhepo, kutyaira vashanyi vazhinji kuti vashandure kusangana kwevanhu kunoda kubatikana mupfungwa. Ini handitende kuti kuziva chiziviso ndicho chinhu chekutanga pakushandisa mapuratifomu enhau, ndinotenda kuvaka mukurumbira ndewe. Vanhu vanovimba nevanhu… uye vamwe vevanhu ivavo vanoshandira zvigadzirwa. Handina nhaurirano kana kuverenga pfungwa dzezviratidzo pamhepo, ndinotaura, ndinogovana nekutenga kubva kuvanhu.
Handina basa nemotokari. Traffic haina basa kunze kwekunge traffic ichifambisa zvawanikwa zvebhizinesi. Maitiro uye shanduko nyaya kupfuura traffic. Ini ndinogona kuenda kunotenga shambadziro inotyaira mazana ezviuru zvemaonero kune webhusaiti, hazvina basa kunze kwekunge traffic iri yakakosha, inofarira, uye inotungamira munzira yekushandurwa. LinkedIn "zvakanaka" asi Facebook yakanaka? Kunaani?
Iyo yemagariro midhiya mamiriro ndeye kwete nezve mapuratifomu, ndezve izvo zvavanoita nemazvo uye vasingaite zvakanaka kubatsira mabhizinesi kutaurirana nezvavanotarisira uye vatengi. Panzvimbo pemapuratifomu, izvi zvinofanirwa kutaura kune izvo zvemukati zvaunokwanisa kugovana, kuti unokwanisa sei kuigovana, uye izvo izvo mutengi kana tarisiro yaanogona kuita nazvo. Vanogona kutaurirana nezvazvo? Vanogona here kukwidziridza meseji yako kune vateereri vanonyanya kukosha? Vanogona kutenga kubva kwazviri here? Mapuratifomu achauya oenda, asi hunhu hwemagariro ndicho kiyi.
Kutaurirana kwevatengi hakuna basa, mutengi ungwaru zvinoita. Ndeupi mafungiro e brand yako online? Iwe unozivikanwa sei uchienzaniswa nemakwikwi ako? Ndeapi vanhu vari kuda mune yako indasitiri? Uri kugadzirisa mukurumbira wako zvakanaka here? Uri kushandira vatengi vako mushe mushe mushe mushe mushe uko kugona kwevatengi vako kunogovaniswa paruzhinji? Chii chauri kuita neyakawandisa vhoriyamu yedata nehungwaru izvo zviri kunze uko nezve ako tarisiro uye vatengi?
Hapana hurukuro ye famba (kunze kweiyo Instagram's app), zvomunharaunda, uye kushambadzira munharaunda? Aya matatu maficha enhau enhau ari kugadzira kukura kukuru, buzz uye mhedzisiro? Zvakadii nezvekuti ipuratifomu imwe neimwe inogona sei kuburitswa pamadhizaini uye kutariswa zvinobudirira? Handikwanise kutenda kuti hapana ruzivo pane izvi kana iwe uchitaura kune mamiriro enhau enhau.
Ini handitombodi kupinda mune kuti SEO yakagadzira sei patafura. Kana iwe uchida kutarisa yakakura infographic iyo inogona kubatsira ako enhau media kushambadzira, tarisa A Munda Nhungamiro yekufambisa Masocial Media, Mashandisiro anoita Mabhizimusi Social Media, Yemagariro Yemunharaunda Nhare uye Mitemo yeSocial Media kune rumwe ruzivo runobatsira.
Ndinoda zvechokwadi CMO.com - Ndiri kuverenga rumwe ruzivo runoshamisa uye kuraira ipapo zuva rega rega, asi iyi infographic inosuwa zvachose mucherechedzo weavhareji mushambadzi kuti ashandise vezvenhau zvinobudirira. Usango rova ​​tafura mu Photoshop uye udane iyo infographic. Tora a nyanzvi infographic dhizaini uye taura nyaya iyo vatengesi vanogona kunzwisisa, kudya, kutenda uye kugovana!
Unogona kutarisa izvi infographic uye haubvumirani neni. Ndinoda kuziva, zvakadaro, nderipi zano rinoshanda rawakaunganidza kubva kune ino infographic uye kuti uchaiisa sei kushandisa kune rako bhizinesi.
Tags: 2014 magariroyakaipa infographicbrand awarenesscmokutaurirana kwevatengiFacebookGoogle +infographicinfographic dhizainiInstagramLinkedInPinterestyakashata infographicseoslidesharetraffic trafficTwitterYouTube